नेपाल प्रहरी : कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय छवि ?
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतमा बढी केन्द्रित नेपाल प्रहरी बिस्तारै त्यसबाहिर प्रवेश गर्‍याे । वि.सं. २०२४ कोशेढुङ्गा बन्यो । कारण थियो, नेपाल प्रहरी इन्टरपोलको सयौँ सदस्य राष्ट्रको रुपमा प्रवेश । बिस्तारै प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दरिलो पाइला चाल्दै आएको छ । हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा फौज पठाउने मुलुकको पाँचौ ठूलो देश नेपालको प्रहरीले २०४८ फाल्गुण २९ देखि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले विश्वका २० देशमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत् सेवा प्रदान गरेको छ । बिभिन्न कालखण्डमा प्रहरीका बिभिन्न अधिकृतहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रहरीको प्रतिष्ठा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरका छन् । आइजीपी सर्वेन्द्रको पनि यसमा विशिष्ट योगदान छ ।
सर्वेन्द्र आइजीपी भएपछि प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा बढ्दैछ । गत असारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले न्युयोर्कमा आयोजना गरेको ‘चिफ अफ पुलिस समिट’मा नेपाल प्रहरीको प्रस्तुतिकरण र सिफारिश बेजोड रह्यो। सम्वद्ध पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरी राष्ट्रसङ्घमा प्रहरीको भूमिका बढाउन ‘माइलस्टोन’ सावित भयो । गत मंसीरको पहिलो साता युएइमा आयोजित इन्टरपोलको ८७ औं महासभामा उनले चीन, मलेसिया, युएई, कतार लगायतका नेपालसँग राष्ट्रिय स्वार्थ र अपराधिक सञ्जाल जोडिएका मुलुकका बिभिन्न प्रहरी प्रमुखहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी द्विपक्षीय हित तथा सहयोग आदानप्रदानका विषयमा नयाँ दिशा कोरेका थिए । यसै समयमा इन्टरपोलको सहयोगले नेपालका दर्जनौं अपराधी समातिए । बिभिन्न १३ वटा खुङ्खार अपराधीलाई ‘रेड–नोटिस’ जारी हुने सफलता मिल्यो । विभिन्न ११ जना व्यक्तिविरुद्द ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भएको छ । थुप्रै कुख्यात अपराधी नेपाल ल्याइएको छ । विभिन्न ८ प्रकारका नोटिस जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अभियुक्तको खोजी भएको छ ।
भर्खरै कतारसँग सुरक्षा सहयोग सम्झौतापत्र (एमओयु) भएको छ । यसै समयमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ‘डाटा प्रविधि तथा प्रहरी आधुनिकीकरण फोरम’मा नेपाल सहभागी हुन सक्यो । मित्रराष्ट्र चीनको ग्वान्जाओमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रहरीले आधुनिकीकरण तथा बिग डाटा प्रविधि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्‍याे। इन्टरपोलको आयोजनामा हालै एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा सेना र प्रहरीको संयुक्त तालिम सञ्चालन भयो । यस बीचमा देशमा बिमस्टेक, एसिया प्यासिफिक समिटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र इन्टरपोलका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । महिला एवं मानव तस्करी रोक्न र अनुसन्धान गर्न देश र विदेशबाट सहज सूचनाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ११७७ नम्वरको निशुल्क टोलफ्री फोन स्थापना गरिएको छ । सयौं पीडितलाई भारत र तेश्रो मुलूकबाट उद्धार गरी दोषीमाथि कार्वाही भएको छ ।
यसैगरी, मंसीर ६ गते नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एसिया इन्भारनमेन्ट इन्फोर्समेन्ट अवार्ड, २०१८’ प्राप्त गर्‍याे । थाइल्याण्डको बैंककमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनबाट ‘इन्टेग्रिटी’ विधामा प्रदान उक्त पुरस्कार नेपाल प्रहरीको ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो’ले प्राप्त गरेको हो । एसियामा अन्तरदेशीय वातावरणीय अपराधको विरुद्धमा कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय, संस्था, व्यक्ति तथा समूहलाई सार्वजनिक रुपमा बितरण गरिने उक्त पुरस्कार सन् २०१५ र २०१७ गरी दुईपटक वितरण भइसकेको छ । तेस्रोपटक हालको पुरस्कार नेपाल प्रहरीले पायो । नेपाल प्रहरीले वातावरणीय तथा वन्यजन्तु अपराध रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकाले उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । ‘दक्षिण एसिया’का प्रहरीलाई यी दुवै पदक पहिलोपटक प्राप्त भएका हुन् । यी विषयहरू नेपाल र नेपालीका लागि गौरवका विषय हुन् ।
अन्तमा, बिगतमा आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेका आइजीपी सर्वेन्द्रको प्रयासले छोटो समयमै प्रहरीको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अभूतपूर्व रूपमा फैलिदो छ । तर, दुखको कुरा यसै बीचमा ‘निर्मला पन्त’को एउटा केशमा भने सफलता प्राप्त भएको छैन । १४ सय ५९ मध्येको एउटा यो मुद्दालाई इंगित गर्दै केही तत्व आइजीपी सर्वेन्द्रको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय छवि, समग्र कार्य सम्पादन र प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने चेष्टा गरिरहेका छन् । आवश्यक समयमा यो मुद्धामा पनि सफलता प्राप्त हुने नै छ । प्रहरीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिउँ, अनुसन्धानमा धैर्यता राखौं । आशा गरौं, स्वदेश तथा विदेशमा अब्बल छवि बनाएका सर्वेन्द्रले इतिहासलाई साक्षी राख्दै निर्मला प्रकरणमा पनि सफलता प्राप्त गर्नेछन् ।
Tagsनेपाल प्रहरी मनहरि तिमिल्सिना सर्वेन्द्र खनाल